Jeneraal C/llaahi Cali Mire (Carays) oo ka warbixiyay qorshayaasha dagaal ee cusub ee Al-shabaab – Radio Daljir
Jeneraal C/llaahi Cali Mire (Carays) oo ka warbixiyay qorshayaasha dagaal ee cusub ee Al-shabaab
Febraayo 18, 2013 5:10 b 0
Garoowe, Feb 18- La taliyaha m/weynaha Puntland ee dhanka amniga Jeneraal C/laahi Cali Mire Carays oo isagoo jooga Garoowe waraysi dhinacyo badan siiyay daljir ayaa odorasay qorshayaasa cusub ee ay billaabeen xooggaga Al-shabaab.
Tan iyo markii dawladda federaalka iyo AMISOM ay shaaciyeen koonfurta Soomaaliya in ay uga guulaysteen Al-shabaab awooddoodiina la wiiqay waxaa soo baxayey walwalo xooggan oo ku saabsan suuragalnimada in ay u digo-rogtaan deegaanno cusub oo ay ka mid noqon karaan meelaha xasilloon oo Puntland iyo Somaliland ay ku jiraan.
Al-shabaab dhinacooda markii la soo saaray warka ku saabsan wiiqidda awooddooda waxay uga jawaabeen in aysan tabar-gabin hase ahaatee ay baddaleen xeeladdoodii dagaal.
Gen. C/llaahi Cali Mire Carays oo ah la taliyaha m/weynaha Puntland ee xagga amniga, horayna u ahaan jiray taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland oo daljir ay ka waraysatay arrimo badan oo ku aaddan filashooyinka Al-shabaab, dhulalkooda gabbaad iyo dhaqaale.
Jeneraalka oo leh khibrado badan oo dhinacyada ciidamada iyo dagaaladaa ayaa sheegay in Al-shabaab liicitaankoodii koonfurta Soomaaliya xiligan ay u soo diga rogtoon dhulka buuralayada ee Puntland, isagoo geesta kalana sheegay inay maciin bidayaan magaalooyinka badda leh sida Boosaaso oo qorshahoodu damac uu yahay inay ku cararaan waxna kala soo dagaan.
La taliyaha m/weynaha PL ee dhanka amniga ayaa sheegay in Al-shabaab muddo fara badan ay ku haminayeen inay qabsadaan magaalada Boosaaso, hase ahaatee awoodda ciidan iyo taageerada shacabka Puntland ay ka hor taagan tahay riyadaasi.
Hadalka Jeneraal Carays oo horay mar u soo noqday taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland ayaa ku soo aaday xili dhawr habeen ka hor xooggaga Al-shabaab ee buuraha Galgala ay soo weerareen deegaanka Ceelaayo oo qiyaastii 40km u jira magaalada dekaddaa ee Boosaaso.
Taliska Ciidamada daraawiishta Puntland ee difaacca Galgala oo ka waramay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee kadhanka ah Al-shabaab
Caawa iyo Daljir, Sabti, Feb, 16 Cabdi Xasan Rooble ‘Awoowe’ ( Daljir Garoowe)